सरकारको ‘विप्लव’ माथि प्रतिबन्धको निर्णय अत्यन्तै गलत , ‘फासीवाद कदम’ ; मोहन वैद्य किरण::Nepal's Online News Portal
सरकारको ‘विप्लव’ माथि प्रतिबन्धको निर्णय अत्यन्तै गलत , ‘फासीवाद कदम’ ; मोहन वैद्य किरण
बुध, फाल्गुन २९, २०७५
काठमाडौँ– विप्लव नेतृत्वको माओवादीमाथि सरकारी प्रतिबन्धलाई लिएर आलोचना बढेकाे छ ।
विप्लवसँगै जनयुद्धमा होमिएकाहरुले समेत उनी र उनको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले गलत गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
जनयुद्धका सहकर्मी एवं केही वर्ष अघिमात्रै एउटै पार्टीबाट अलग भएका मोहन वैद्य किरणले सरकारको ‘विप्लव’ माथि प्रतिबन्धको निर्णय अत्यन्तै गलत भएको र त्यो ‘फासीवाद कदम’ भएको बताएका छन्।
किरणले बुधबार देशसञ्चारसँग भने,‘राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिक रुपैले नै गर्नुपर्छ। त्यो नगरेर सरकारले ठूलो गल्ती गर्यो। यसखालको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्छ। सरकारको दमनकारी भूमिका तत्काल बन्द गर्नु पर्छ। उहाँहरुसँग वार्ता गर्नु पर्छ ।’
विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने ठाडो प्रस्ताव उनीसँगै जनयुद्धमा रहेका उनका सहकर्मी एवं तत्कालिन माओवादीका कमाण्डर रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रीको हैसियतमा मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगेका थिए।
यसलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालै स्वीकृति गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं तत्कालिन एमाले र सोही माओवादीबीच एकता भई जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)का एक अध्यक्षले मुलुकको शान्ति सुरक्षा खल्बलाउनेलाई निषेध गरिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट मन्त्रीपरिषद् बैठकमा बादलले ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
त्यसबारे ओलीले ‘व्रिपिङ’ गर्दा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका नेकपामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारात्मकरुपमा समेत लिएका थिए।
दाहालले आइतबार पोखरा पुगेर युद्धकालको जस्तो ‘प्रचण्ड’ बन्न नखोज्दा राम्रो हुने चेतावनी विप्लवलाई दिएका थिए।
किरणले विप्लवसँगै युद्ध गरेकाहरु सरकारमा आएर विप्लवलाई मात्रै आपराधिक समूहको ‘विल्ला’ लगाई राजनीतिक गतिविधिबाट रोक्नु अनौठो भएको बताए।
उनले भने,‘ राजनीतिकरुपमा काम गर्दा या जनयुद्धकालमा हामीलाई पनि तत्कालिन सरकारले आपराधिक समूह भन्थ्यो । त्यसो भए अहिले सरकारमा बस्नेहरु चोखा छन् त ? त्यही जनयुद्धकै भरमा सरकारमा बस्न हुने उनीहरुलाई अनि अहिले राजनीतिक माग राखेर अघि बढेको समूहलाई अपराधी भनेर प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ?’
सरकारबाट प्रतिबन्दको निर्णय फिर्ता नगरेमा मुलुक पुनः मुठभेडमा होमिने संकेत किरणले गरे।
२०६९ असर ३ गते काठमाडौँस्थित वौद्धमा राष्ट्रिय भेला गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबाट किरण, वादल, विप्लवले पार्टी विभाजन गरी ‘नेपाल कम्युनिट पार्टी माओवादी’ गठन गरेका थिए।
त्यही वर्ष पुस २४ गते देखि माघ २ गते सम्म चलेको पार्टीको सातौ महाधिवेशनबाट किरण अध्यक्ष बनेका थिए भने वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए तर आन्तरिक मतभेदका कारण उनीहरुको सहकार्य लामो समय टिकेन र २०७१ सालमा पार्टी विभाजन भएको थियो।
किरण र बादललाई छोडेर विप्लव र खडकबहादुर विश्वकर्माले छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले उनको पार्टीलाई वैधाकिता नदिएको बताउँदै आएको छ।
‘नेकपा माओवादी’ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ नै नाम राखी पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका महासचिव विप्लव केही समयदेखि भूमिगत छन् ।
किरणले कुनै कारण बस आफूहरु विप्लव समूहसँग छुट्एिपनि उनीमाथिको प्रतिबन्ध राजनीतिकरुपमा निकै ठूलो भुल भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले भने,‘ हामी कुनै कारण बस पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यौँ तर हामीले एउटै उद्देश्यसहित युद्ध सुरु गरेका थियौँ र त्यसका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सँगै पनि थियौँ । तर आज उहाँहरुमाथि जे भएको छ त्यो ठिक होइन।’
पार्टी एकीकरण भयपछी समाजवादी पार्टीले मुख्य मुख्य शहरमा आमसभा गर्दै
काठमाडौं । नवगठित समाजवादी पार्टीले एकताको सन्देश दिन सातवटै प्रदेशका मुख्य शहरमा आमसभा गर्ने भएको छ । पार्टी एकताको सन्देशका साथै अगुवा कार्यकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्न लागिएको समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष...
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सभापति देउवा भए पनि छोडिन्न : नेता पौडेल
गाईघाट । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध जुनसुकै तहका र जो सुकै नेताहरु पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको थाहा पाए कडा कारवाही गरिने बताएका छन् । प्रेस युनियन उदयपुरले शुक्रबार बिहान उदयपुर जिल्लाको...
‘मेरो सरकार’ले मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्न सक्छ ?
‘अहिलेनेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले हाँस्यकलाकारले देश चलाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ब्यंग गरेका छन्। हाँस्यकलाकारले देश चलाइरहेका छन्। हाँस्यकलाकार स्टेजबाट ओर्लेर सिंहदरबार गए,’ काठमाडौंमा बुधबार आयोजित पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियानमा कांग्रेस संसदीय...
कसरी भयो संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता ? पढ्नुहोस्
काठमाडौं। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएको छ। सोमबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा यी दलबीच एकता भएको हो। एकता भएसँगै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको नेताहरुले...
चीनबाट फर्किएको भोलिपल्ट नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अमेरिका जादै
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालआज अमेरिका जाने भएका छन् । चीन भ्रमणबाट हिजो मात्र फर्किएको नेता नेपाल आज साँझा अमेरिका जान लागेका हुन् । नेता नेपाल...
काग्रेस पार्टी प्रगतिशिल शक्ति सिध्याउन प्रतिगामी शक्तिसँग मिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली काँग्रेसले प्रगतिशील र वामपन्थीसँग मिलेर अघि बढ्नुको साटो प्रतिकृयावादी शक्तिहरुसँग घाँटी जोडेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी स्थापनाको ७० बर्षगाठ मनाउन तथा पार्टी एकता प्रकृयाबारे केही निर्णय सुनाउन...
सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको डा. बाबुराम भट्टराईको आरोप
काठमाडौँ – नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका संयोजक भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको...
किन देखाए यी युवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालोझण्डा ? को हुन् यी युवा ?
बुटवल । शुक्रवार बुटवलको एक बिशाल कार्यक्रममा एक मात्र युवा रुद्रप्रसाद घिमिरेले सयौं सुरक्षाकर्मी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताको भीडबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने ‘हिम्मत’ गरे दुस्साहस’को हदमा उत्रिएर प्रम ओलीलाई...
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ संशोधन विधयेकप्रति मानवअधिकार आयोगको आपत्ति
काठमाडौं, वैशाख ७ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ । आफ्नो स्वायत्ततामै असर पर्ने परी ऐनका दफाहरु परिवर्तन गरेर सरकारले संशोधन विधेयक अघि...